Manafaka anay ny fiteny Quichua · Global Voices teny Malagasy
Nandika (en) i Belen Febres-Cordero
Voadika ny 08 Novambra 2019 7:50 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, Ελληνικά, English, Português, Español
Tamin'ny fianarana tantara taty aoriana, dia nampianarina momba ny fanjanahan-tany sy ny fandikana tsy marina aho. Tamin'ny mpampianatra ahy no nahalalako ny niforonan'ny Repoblikan'i Ekoadaoro, firenena nahaterahako. Nampianarin'izy ireo anay ny anaran'ireo filoham-pirenena tao Ekoadaoro ary nitondra anay nitsidika ireo fiangonana katolika tao amin'ny ivon-tanàna manan-tantara Quito, toerana naha-lehibe ahy izy ireo. Tsy tadidiko ny firesahana ny kolontsaina teratany tao anatin'ny fianarako, afa-tsy tamin'ny fotoana fohy nihaonako tamin'ilay mpanao tantara Huasipungo raha teo am-pamaranana ny fianarako tany amin'ny lisea aho.
Hafa kosa ny zava-misy iainako andavanandro. Tena misy eo amin'ny fiainako andavanandro ny karazana fitafy, fomba amam-panao sy kolontsaina. Ambonin'izany, feno teny nindramina avy amin'ny Quichua, iray amin'ireo fiteny razamben'i Ekoadaoro ny voambolako, sahala amin'ireo Ekoadaoreana miteny Espaniôla. Mbola milalao baolina kitra amin'ny «cancha» aho, milaza hoe ‘achachay‘ rehefa mangatsiaka aho, ary milaza ny rahavaviko hoe ‘ñaña.’ Saingy vao haingana, ho ahy manokana dia fiteny izay niara-nipetraka tamiko ny Quichua, saingy tsy tena fantatro.
Matetika ny fanoloran-tenan'i Rasu amin'ny fiaviany Quichua no nanosika azy hampihatra izay nianarany tamin'ny fampianarana ny fiteny, izay mpikambana ao amin'ny fianakavian'ny fiteny manana karazany ao amin'ny firenena amerikanina Tatsimo fito.
Nahatratra izany tanjona izany niaraka tamiko izy. Notiaviko hatrany ny feon'i Quichua, saingy satria nipetraka ivelan'i Ekoadaoro nandritra ny valo taona aho, dia tsy nisy ny hirika ho ahy mba hianarana ilay fiteny. Ny fiaraha-miasa tamin'ny vondrom-piarahamonina teratany vitsivitsy tamin'ny alàlan'ny tetikasa Rising Voices Reframed Stories, na izany aza, no nahatonga ny fikasako hianatra Quichua, ary, efa ho fito volana lasa izay, nahita dokambarotra momba ny fampianaran'i Rasu tao amin'ny Facebook aho, nanontaniako izy raha afaka mianatra izany antserasera aho.